भगवान् गौतम बुद्धले दिएको ५ अनमोल वचनहरु अवस्य जान्नुहोस् – Sapana Sanjal
July 9, 2021 137
Sapana Sanjal : भगवान गौतम बुद्धले बौद्ध धर्मको प्रवर्तन गरेका थिए । बुद्धको अहिंसा र करुणाको सिद्धान्तले सम्राट अशोकलाई यतिधेरै आर्कषित गरेको थियो कि उनले यसबाट प्रभावित भई बौद्ध मतलाई स्वीकार गरे युद्धमा रोक लगाएका थिए ।बुद्धका अधिकतर उपदेश सामाजिक र सांसारिक समस्यामा केन्द्रित रहेको छ ।
उनले सैयौं बर्ष पहिले भनेका कुरा वा विचार आज पनि प्रासँगिक रहदै आएको छ । उनका वाणीहरुले व्यक्तिको जीवन सफल र सुखीमय बनाउन मद्दत गर्दछ ।बुद्धका अनमोल वचनमार्फत व्यक्तिलाई जागरुक गराउनुका साथै ज्ञानको प्रकाश फैलाउन मद्दत गर्दै आएको छ । गौतम बुद्धका केही अनमोल वचनका साथ दिनको शुरुवात गरे सकारात्मक सोच बढ्दछ ।
३. अरुसँग लडाई गर्नुभन्दा तिमी आफैमा जित हासिल गर । यसो गर्दा तिमीले कुनै समस्या भोग्नु पर्दैन बरु उल्टै जित तिम्रो हुनेछ । यदि तिमीले आफूमाथि जित हासिल गर्यौ भने तिमीलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन ।
४.बुद्ध भन्छन्, ३ चीज लामो समयसम्म लुक्न सक्दैन- सुर्य, चन्द्रमा र सत्य । तसर्थ यदि तिमीबाट कुनै गल्ती भयो भने यसलाई नलुकाउ किनभने यो लामो समयसम्म टिक्दैन ।
५. तपाईंसँग जे जति छ, त्यसैमा खुसी हुनुहोस् । आफुसँग भएभन्दा बढि अरुको सामु बढाई चढाई गरी नभन्नुहोस् । साथै अरुको कुनै पनि चीजमा ईर्ष्या नगर्नुहोस् । जो अरुको ईर्ष्या गर्दछ उसको मनमा कहिल्यै शान्तिको वास हुँदैन ।
Prevधर्ती माताले फेरी गरिन नेपालको ड रलाग्दो भबिस्यवाणी – राजा, रबि र देश, २०७८ मा यति ठुला ख त राहरु आउदै छन्, बाढी पहिरो ? हेर्नुस के के ?